သင်ယူမှုအတတ်ပညာ (မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းစေရန်နည်းလမ်းများ) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on June 26, 2011 at 14:40 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
စာသင်သားဘ၀မှာ အချိန်ရဲ့အများစုကို စာကျက်မှတ်ခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးကြရပါသည်။ စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ စာကျက်မှ စာမေးပွဲအောင်မည့်အတွက် မဖြစ်မနေကျုံးရုန်းကြရပါသည်။ တစ်ခါတစ်လေ စာမေးပွဲကျသည့်အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် အမှတ်နည်းသည့်အခါမျိုးတွင် လူကြီးမိဘတွေက ``ကျမှာပေါ့ စာ မှ မကျက်ဘဲကိုး။´´ ဟုကြိမ်းမောင်းခံရသည်။ တစ်ချို့တွေက လည်းပြောကြသည်။ ``ကျွန်မကတော့ ကျက်တာပဲ။ ဥာဏ်က သိပ်မကောင်းတော့ ကျက်သမျှ မမှတ်မိဘူး။ ´´ ``စာမေးပွဲခန်းထဲရောက် သွားတော့ ကျက်ထားတာတွေမေ့ကုန်ရော။ ´´
မှတ်ဥာဏ်ဆိုသည့်အရာကို ကျွန်တော်တို့က သဘာဝတရားကြီးနှင့်ရောထွေးထားတတ်သည်။ မွေးကတည်းက ပါလာသည့်အရာတစ်ခု၊ မိမိပြုပြင်ဖန်တီးဖို့ တတ်စွမ်းနိုင်သည့်အရာမဟုတ်ဟု တွေးထင်တတ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်လည်း``သူကတော့ ဥာဏ်ကောင်းတယ်။ ကျက်သမျှ အကုန်မှတ်မိတယ်။ ဒီကလေးကတော့ ခပ်ထုံထုံထဲကပါ။ ဘယ်လောက်ကျက်ကျက် စာမေးလိုက်ရင်မရဘူး´´ဟူသည့် မှတ်ချက်တွေ မကြာခဏကြားနေရတာပေါ့။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကလေးတွေကိုစာသင်သည့်အခါ မကြာခဏ ထိုကလေးမျိုးကိုတွေ့ရတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ်က နည်းစနစ်မျိုးစုံသုံးပြီး ဘယ်လောက်သင်သင်၊ မေးလိုက်သည့်အခါ ပြန်မဖြေနိုင်သည့်အခါမျိုးမှာ စိတ်ဓါတ်အင်မတန်မှ ကျမိတတ်သည်။ ကိုယ်သင်တာကပဲ ညံ့နေလို့လားဟု မကြာခဏ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မိသည်။ အမှန်ကတော့ စာမရသည့်ကလေး အများစုသည် စာသာမရတာ ကျန်သည့် သူတို့ စိတ်ဝင်စားသည့်အကြောင်းအရာများတော့ ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ ကျွန်တော် လုံးဝ နားမလည်သည့် ဖဲကတ်လို ကတ်ကလေးများပေါ်မှာ အရုပ်လေးတွေနှင့် အရောင်တွေကိုကြည့်ပြီး ကတ်ရဲ့ တန်ဖိုး ဘယ်လောက် စသည်ဖြင့် သူတို့မှတ်မိနေသဖြင့် အံ့သြမိသည်။ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်ကလေးများကို သူတို့ အလွတ်ရနေသည်။ ပုံတွေကိုလည်း တော်တော်တူအောင် ဆွဲနိုင်ကြသည်။ သည်တော့ စာကျက်သော်လည်း စာမရသည့်ကလေးများသည် ဥာဏ်မကောင်းသည့်အဖြစ်ထက် စာကို စိတ်မ၀င်စားသဖြင့်ခေါင်းထဲမရောက် ဟုသာ ကောက်ချက်ချမိတော့သည်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ စာမကျက်တတ်သဖြင့်စာမရခြင်းပင်။
(ဤနေရာ၌ ဥာဏ် ဟုဆိုရာတွင် မှတ်ဥာဏ် (Memory) ကိုသာဆိုလိုပါသည်။ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး (Intelligence)ကို မရည်ညွှန်းပါ။)
ပညာရေးလောကသားတွေ၊ စိတ်ပညာရှင်တွေ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ စိတ်ဝင်တစားလေ့လာနေရတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေကို ကျွန်တော် သေသေချာချာ မလေ့လာရသေးပေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ပို၍မှတ်မိစေရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းလမ်းများရှိကြောင်းကိုတော့သေချာပေါက်ပြောနိုင်ပါသည်။ အခါများစွာမှာ ကျွန်တော်တို့က မိမိတို့၏ အောင်မြင်မှု/ကျရှုံးမှု တွေကို မွေးရာပါစွမ်းရည်တွေကြောင့်ဟု လက်ညှိုးထိုးပုံချတတ်ကြသည်။ (ဒါကလည်း ခေါင်းရှောင်ရတာလွယ်သည်လေ။) ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ၀ီရိယ တို့ကို မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ထားတတ်ကြသည်။ အနောက်တိုင်းစကားပုံလေးတစ်ခုရှိပါသည်။
ထူးချွန်သူ၊ ပါရမီရှင် ဆိုသည်မှာကား ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ဈာန်ဝင်စားမှုအပေါ်မှာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း လုံ့လ အားထုတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဒီတော့ လုံ့လ၊ ၀ီရိယ တို့ကို မေ့ထားချင်သူတို့ကို မရည်ရွယ်ဘဲ ဥာဏ်ပညာတို့ဖြင့် အနာဂါတ်ကို တူးဆွချင်သူ၊ ကျိုးစားအားထုတ်ချင်သူ လူငယ်အပေါင်းတို့အတွက် မှတ်ဥာဏ်အထောက်အကူပြုနည်းလမ်းများ (Memory aids techniques) ) များကို ရှာဖွေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ သိပြီးသားတွေလည်း ပါနေမှာပါ။
စာကျက်ရာမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် အကြောင်းအရာတစ်ခုကို နားလည်အောင်အားထုတ်ပြီးမှ ဆက်စပ်လေ့လာ ကျက်မှတ်ရပါတယ်။ ကိုယ် နားလည်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ မှတ်မိလည်း လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ခါတစ်လေမှာ နားမလည်တဲ့စာတွေ၊ အဓိပ္ပါယ် အဆက်အစပ်မရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်တွေကို မှတ်သားရာမှာတော့ အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်း (rote learning)ကိုမလွဲမရှောင်သာ လုပ်ကြရပါတယ်။ အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာ အလွယ်မှတ်နည်း (memory devices) တွေကိုသုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဂျော့မစ်လာ ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ၁၉၅၆ ခုနှစ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုအရ လူတစ်ယောက် တစ်ခါမြင်ရင် အချက်အလက် ၅ ခုကနေ ၉ ခုအတွင်းသာ မှတ်သားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ တယ်လီဖုံးနံပတ်တွေ၊ ကုတ်နံပါတ်တွေမှတ်ရာမှာ သုံးလုံးတစ်တွဲ (သို့) နှစ်လုံး-လေးလုံးတွဲ စသည်ဖြင့် အုပ်စုအသေးလေးတွေ ခွဲပြီးမှတ်တဲ့အခါမှာ တစ်တန်းတည်းမှတ်တာထက် ပိုမှတ်မိလွယ်တာ အများသိပြီးသားပါ။ ဥပမာအားဖြင့် 135789456213 ဆိုတဲ့ ဂဏန်းတွဲကို 135 789 456 213 ဆိုတဲ့အတွဲလေးတွေတွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ တကယ်မှတ်လိုက်တာက ဂဏန်းသုံးခုကိုပဲမှတ်လိုက်တာပါ။ ပြီးမှ အဲဒီ သုံးလုံးတွဲ လေးတွဲကို ဆက်စပ်လိုက်တဲ့အခါ အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်ပါတယ်။
ဒီကုတ်နံပါတ်ဆိုရင်ကော မိတ်ဆွေ ဘယ်လိုမှတ်မလဲ TBCOPWTCHJMPQRXZ
ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာပေးထားသလိုအုပ်စုဖွဲ့မှတ်မှာပဲ။ ကိုယ်ရလွယ်သလိုသာမှတ်ပါ။ ပုံသေအဖြေမှန်မရှိပါဘူး။
TB COP WTCH JM PQR XZ
အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းက မြန်မာစာမေးခွန်းမှာ ကဗျာမေးခွန်းကိုအင်မတန်သဘောကျခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကဗျာကိုရရင် မေးခွန်းကို မိမိစိတ်ကူးနှင့်ပြန်၍စီကာပတ်ကုံး ရေးနိုင်လို့ပါပဲ။ စကားပြေရေးထားတာကို ကျက်စရာမလိုဘူးလေ။ ကဗျာဆိုတာက အသံသာယာတော့ နှစ်သက်တတ်သူဆိုလျှင် သုံးလေးခေါက် အသံထွက်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ အလွတ်ရသလောက်နီးပါးဖြစ်နေပြီ။ ဒါကြောင့်လဲ ကျက်ရခက်တဲ့ ဓါတုဗေဒက periodic table က ဒြပ်စင်နံမည်တွေကို ကဗျာပုံစံမျိုးအရလွယ်အောင် ကျူရှင်တွေမှာ သင်ကြတာပေါ့။ အသိများကြတဲ့ rhyming ဥပမာကတော့
ဧပြီ ဂျွန် နဲ့ နိုဝင်ဘာ
ဆိုတဲ့ကဗျာလေးပါပဲ။ ဒီလို ကဗျာပုံစံရေးဖွဲ့လိုက်ခြင်းဖြင့် မှတ်မိလွယ်ယုံသာမက မိမိရဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရည်ပါတိုးတက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ရေးဖို့တော့လိုပေလိမ့်မည်။ အခါခပ်သိမ်း ဆရာရေးထားပေးတာကို လက်တင် ကျက်မှတ်တဲ့အကျင့်များ လျှော့နိုင်သမျှ လျှော့သင့်ပါသည်။
Acronym ဆိုတာက ၀ါကျ(သို့မဟုတ်) ပုဒ်တစ်ခုရဲ့ အစ စကားလုံးတွေကို ပေါင်းပြီးအသံထွက်လိုက်တဲ့အခါ ရလာတဲ့စကားလုံးကို မှတ်သားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ ကန်ကြီးများ (Great Lakes) တွေရဲ့နာမည်ကို Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior စသည်ဖြင့် ကျက်မည့်အစား acronym လုပ်၍ HOMES လို့မှတ်ထားရင် လွယ်လွယ်မှတ်မိနိုင်တာပေါ့။ ဒီလိုနည်းမှာက နှစ်ဆင့် မှတ်ရတဲ့သဘောရှိပါတယ်။ ပထမ အားဖြင့် HOMES ကို မှတ်ရပြီးတော့ ဒုတိယအဆင့်မှာ စာလုံးတစ်လုံးခြင်းကိုယ်စားပြုတဲ့ အကြောင်းအရာကိုလည်း မှတ်ရပါတယ်။ ကွန်ပျူတာသမားတွေအတွက် အထင်ရှားဆုံးဥပမာတစ်ခုကတော့ WYSIWIG (၀ီးဇီးဝဂ်) What You See Is What You Get. ဆိုတာလေးပါပဲ။ အမှန်အားဖြင့်တော့ ယခုဖော်ပြနေတဲ့နည်းလမ်းများဟာ မှတ်ဥာဏ်ကို ပြန်အစဖော်ပေးတဲ့ memory aids တွေပါပဲ။ ကျက်ထားတာတွေကို စာမေးပွဲခန်းထဲမှာ အစီအစဉ်တကျနဲ့ ပြန်ဖော်နိုင်စေတဲ့အရာတွေပဲပေါ့။
သူလည်းအတိုကောက်မှတ်နည်းလိုပါပဲ။ ပထမဦးဆုံးစကားလုံးတွေယူပြီး စာလုံးအသစ်လုပ်တဲ့အစား ၀ါကျတစ်ခုဖွဲ့လိုက်တာပါ။
My Dear Aunt Sally (Multiply and Divide before you Add and Subtract)
သင်္ချာမှာ စရှင်းရတဲ့အစီအစဉ် ကိုအတိုမှတ်ထားတာပါ။
presentation တွေလုပ်ရာမှာ လိုက်နာရမယ့် အချက်တွေကို ဒီလိုမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
" P-P-P-P-P ! "
(Proper Planning Prevents Poor Performance)"
" A-B-C ! "
(be Accurate, Brief and Clear)
"Have P.R.I.D.E. in your work"
(ie. Personal Responsibility In Daily Efforts)
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ရိုးရာ သုံးလာခဲ့တဲ့ နည်းစနစ်ဖြစ်တဲ့ ကဗျာတိုလေးတွေနဲ့မှတ်ထားတဲ့ နည်းဟာ အထက်ပါနည်းလမ်းတွေကို ပေါင်းသုံးစွဲထားလို့ထင်မိပါတယ်။
စိတ်ပညာရှင်တွေက လူသားရဲ့မှတ်ဥာဏ်ဟာ တွဲစပ်ခြင်း (association) ရှိတဲ့အခါပိုပြီးမှတ်မိတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပန်းသီးဆိုတဲ့စကားလုံးကို အနီရောင် ပန်းသီးပုံရိပ်လေးနဲ့တွဲမှတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ မူရင်းမှတ်တဲ့အရာနဲ့ တွဲတဲ့အရာ နီးစပ်မှုရှိလေလေ မှတ်သားနိုင်စွမ်း ပိုကောင်းလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် တစ်ခုခုကို မှတ်မိအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဆိုရင်
Law of Recency(နီးကပ်မှုဥပဒေသ)
Law of Vividness (ထင်ရှားမှု ဥပဒေသ)
ထူးခြားတဲ့အခြင်းအရာ၊ မျက်စိထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကို ပိုမှတ်မိ တတ်ပါတယ်။
Law of Frequency (ထပ်ကြိမ် ဥပဒေသ)
မကြာခဏမြင်ကြား တဲ့အရာ၊ ပိုအသုံးပြုနေရတဲ့အရာကို ပိုမှတ်မိတတ်ပါတယ်။
ဆိုတဲ့ ဥပဒေသတွေကို စိတ်ထဲသဘောပေါက်နားလည်ထားပြီး အထက်ပါနည်းလမ်းတွေကို မိမိဥာဏ်စွမ်းရှိသလို အသုံးပြုလျှင် စာသင်သားအပေါင်း စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်မှ ကျက်ထားတဲ့ စာများမေ့လျော့ခြင်းမှ ကင်းဝေးပါစေကြောင်း နိဂုံးချုပ်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
Permalink Reply by 1x91ubk6kshjs on June 30, 2011 at 9:52
Real Useful Method !
Permalink Reply by 1cvqy7o7es7zi on June 30, 2011 at 9:57
Permalink Reply by ko lynn on June 30, 2011 at 10:02
REally good for learning. some clarification- KISS (keep it short and simple or Keep it simple, stupid)..?
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on June 30, 2011 at 12:54
for me, KISS (keep it short and simple) would be better.
Permalink Reply by Trigems on June 30, 2011 at 10:57
Thanks .... Let me share in Facebook ..!
Permalink Reply by Cho Thet Aye on June 30, 2011 at 11:00
Nice ...we actually face such kind of problem when we teach as u mentioned in second paragraph...
Permalink Reply by u myo aung on June 30, 2011 at 11:06
Permalink Reply by Kyaw Zin Htoo Naing on June 30, 2011 at 11:24
နောက်တစ်ခါ မှတ်စရာရှိရင် ဒီ article ထဲမှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း မှတ်မယ်။
အခုလို knowledge share တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးနော်။
Permalink Reply by kaykhineoo1987@gmail.com on June 30, 2011 at 12:04
Permalink Reply by 32nceukz5jzvz on August 16, 2011 at 19:36
Hello my name is khant hein ko. I am from Monywa
Permalink Reply by 056dfk3r96a81 on June 30, 2011 at 14:21
Permalink Reply by 21jxqkktmlf2t on June 30, 2011 at 14:41